NEPSE साईटको समस्या जस्ताको तस्तै – Palika Express
NEPSE साईटको समस्या जस्ताको तस्तै
PalikaExpress १० मंसिर २०७७, बुधबार 356 पटक हेरिएको
काठमाण्डौ । सेयर कारोबारमा आजको दिन पनि उछाल आएको छ। नेप्से परिसूचक अहिले सम्म कै रेकर्ड तोड्ने तर्फ लागिरहेको छ । कारोबारको सुरुवातदेखि नै बजारमा उच्च खरीद चाप देखिएको बैंकिंग समूहको उपसूचकमा उछाल आएसँगै समग्र बजार परिसूचकमा रेकर्ड तोड्ने तर्फ लागिरहेको अवस्था मा पुगेको हो । पछिल्लो समय निरन्तर उकालो लागेको नेप्से परिसूचक बुधबार एकैदिन ६४.७० अंकले बढेर १८७४.८१ अंक पुगेको छ ।
त्यसो त यो हप्ता शेयर बजारले राम्रै चर्चा पाएको छ । पछिल्लो समय बजार ईतिहासकै उच्चमा बिन्दु चुम्न मात्र बाकी रहेको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । बजार बढी रहदा लगानीकर्ता थप उत्साहित भएका छन । आज बजार बढ़दा धेरै खरीद बिक्रीको उच्च चाप नबिल बैंकको शेयरमा पनि राम्रै देखिएको थियो ।
आज पनि पुरानै समस्याले लगानिकर्तालाई मारमा पार्यो । बजारमा उतार चढ़ाब हुदा नेप्से साईट पनि नखुल्ने, ढीला खुल्ने आदि समस्या रहेदै आएकोमा अहिले नबिल बैंकको एक सूचकमा त झनै गलत सुचक देखाएको छ । सूचकमा सुरुवाती मूल्य ९८१ छ त्यस्तै उच्च मूल्यमा १०२९ छ भने अन्तिम कारोबार मूल्य १०३८ अंक रहेको छ । त्यस्तै मेरो शेयर साइटमा पनि साइट नखुल्ने समस्याले गर्दा लगानीकर्तामा थप तनाब सिर्जना गरिदिएको छ । साईटमा अहिले पनि समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको छ । तत्काल यस्तो समस्या समाधान नगरे पछि झन समस्या नथपिएला भन्न सकिन्न सम्बंधित पक्षको ध्यान पुगोस !!! जय नेप्से !!
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले बुक क्लोज मितितय